Home Fanka iyo Sugaanta Tixdii iyo Taariikhdii Abwaan Nimco Aadan Hurre (Nimco-gabaydo): Qormada Saddexaad. W/Q Siciid...
Qormada saddexaad ee tixda iyo taariikhda Abwaan Nimco Aadan Hurre (Nimco Gabaydo) Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo’e, waxa aynu ku soo qaadanaynnaa Gabay magaciisu yahay ‘Saw Anaga Maaha’. Waxa uu ka mid yahay suugaanta ugu culus ee sida faahfaahsan uga hadlaya kaalinta haweenka iyo hooyadu ku leeyihiin nolosha aadamaha.
Aan kaftan ka horreysiiyo’e, maye haweenki? Sacab iyo mashxarad ha la oogsadaan. Aaway wiilashi ama raggi? Dhammaantood waxa laga doonayaa in ay ka marag-furaan oo “haa” la boobaan.
Gabaygan oo ka mid ah suugaanta ugu shilis ee ay abwaanaddu curisay wuxuu ifka u soo baxay gu’gii 2003da. Abwaan Nimco-Gabaydo oo ka warramaysa sida uu ku dhashay gabayga Saw Annaga Maaha, waxa ay tidhi “Gabaygan waxa sababay qaddarka Ilaahay ka sokow maahmaah ka mid ah kuwa inta badan loo adeegsado ama lagu xaqiro, ama lagu cadaadiyo haweeenka marka aad dhaqankeenna eegto. Maahmaahdaasi waxa ay aniga igu noqotay hub culus “Nukliyeer” waayo waa maahmaahda marka aan tallaabo suugaaneed qaadayo inta badan i hortaagan. Taas oo ka turjunta cabudhinta iyo cadaadiska haweenka lagu hayo. Waa maahmaah xaqiraad ah ama yasitaan ah.
Maalin maalmalaha ka mid ah waxa digreeto Madaxweyne nagu shaqaaleeyay Madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Daahir Rayaale Kaahin, annaga oo ah fannaaniin badan. Habeen annaga oo ka tumaynna qasriga madaxtooyada ayaa lagu yidhi “Madaxweyne inta badan fannaaniinta halkaas taagani waa bilaa mushahar”. Waxa uu yidhi “Ha la soo tiriyo inta aan mushaharka qaadannin”. Waxa aanu noqonnay toddoba iyo toban qof oo ay shan iyo toban rag yihiin iyo laba dumar ah. Labada haweenka ahi niga iyo Caasha Yoonis IHUN ayaanu ahayn.
Madaxweyne Rayaale waxa uu yidhi “Imaka laga bilaabo waxa lagu shaqaaleeyay dhammaantood digreeto madaxweyne oo derajada kowaad (A) ah, laga bilaabo bishanna mushaharkooda way qaadanayaan”. Waa la shaqaaleeyay dhammaan shan iyo tobankii ragga ahaa. Maalintii aan mushaharka soo doontay waxa la igu yidhi “Adiga iyo Caasha Yoonis midkiinna lama qorin”. Caasha Yoonis IHUN waxa ay u tagtay Guddoomiyihii Haayadda Shaqaalaha Dawladda, waxaana lagu shaqaaleeyay si silic ah, waxaanay ahayd fannaanad iga weyn. Waxana qorana Cabdiraxmaan Cadami oo Haayadda Shaqaalaha Dawladda madax ka ahaa.
Anigu laakiin markii aan mushaharkii soo doontay, aniga oo kalsooni isku qaba waxa uu Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska oo weliba ahaa nin suugaanyahan ah ama bahda hal-abuurka ka tirsani igu yidhi “Adiga wax shaqaalennimo ah laguuma hayo. Waayo saddex iyo toban oo lab, maansayahanna ah ayaa ka shaqaalaysan wasaaradda oo mushahar ka qaata. Adiga oo inan (gabadh) yar ah oo dumar ahi ma waxa aad sheegaysaa wax aanay saddex iyo tobankaas nin sheegin”. Waxa aan ku idhi “Anigu abwaan ayaan ahay, iyaguna waa abwaaniin. Nin weliba ceesaantiisa ayuu ceelka keenayaa. Weliba waxa la igu shaqaaleeyay digreeto madaxweyne. In bandanna bilaa mushahar ayaan qaranka u shaqaynayaye, maxaa sababay in aniga la iga reebo shaqaalaha?”. Waxa uu yidhi “Na akas caano galeen, caqli ma galo’e. Orod oo carruurtaadii bariiska u karso, dumarnimadaadiina ku ekaw. Meeshana iskaga dhaqaqaaq”
“Ayaamona ragaw beerta” yidhi, saw anaga maaha
Aanadu halkii kama tagtoo, laysma aammino’e
Ninkii yidhi “alxay qurus” intay, hooyo tegin iilka
Kan yidhi “aqoon maleh kaskii, caano lagu uumay”
Previous articleMaxay ka wada hadleen Madaxweynaha Somaliland iyo Wefti Ka Socda Dawladda Ingiriiska?
Next article“Deeqda Gebilay maaha Taakulany Abaaraha ee Cusbitaalka Waalida la Siiyey, sidaan Cusbitaalada Waalida ee Dalka u Gaadhsiinay.